आज जेठ ८ गते आइतबार यी राशिको आत्मविश्वास बढ्नेछ, ३ राशि रहनुहोस् सावधान ! - Compaq News
आज जेठ ८ गते आइतबार यी राशिको आत्मविश्वास बढ्नेछ, ३ राशि रहनुहोस् सावधान !
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – ARIES
मन विचलित हुन सक्छ। परिवारमा धार्मिक कार्य हुनसक्छ । कपडामा खर्च बढ्नेछ । बुवाबाट आर्थिक सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा अवरोध आउन सक्छ । आफ्नो स्वास्थ्य को बारे मा सावधान रहनुहोस्। कार्यक्षेत्र विस्तारमा साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । मानसिक समस्या रहनेछ । पारिवारिक समस्यामा कमी आउन सक्छ।
वृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – TAURUS
धैर्य गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । बौद्धिक कार्यले सम्मान मिल्नेछ। धन प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छ । सन्तानबाट शुभ समाचार पाउन सकिनेछ । कामको अवस्थामा सुधार आउनेछ। मानसिक समस्या रहनेछ । लामो यात्राहरु भइरहेका छन् ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – GEMINI
अत्यधिक क्रोधबाट बच्नुहोस्। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। काममा अधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । आलस्य अत्यधिक हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा चिडचिडापन रहनेछ। पारिवारिक समस्यामा कमी आउन सक्छ। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । कार्यस्थलमा परिवर्तनको सम्भावना छ । पुरानो साथीको सहयोग मिल्नेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – CANCER
आत्मविश्वास बढ्नेछ। शैक्षिक वा बौद्धिक कार्यले सुखद नतिजा दिनेछ। परिवारका ठूला-ठूला व्यक्तिहरूबाट धन प्राप्ति हुन सक्छ। बुवाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला । संयमित हुनुहोस् बोलीमा कोमलता रहनेछ। काममा थप जिम्मेवारी आउन सक्छ। मेहनत धेरै हुनेछ। बच्चाले दुःख पाउनेछ। कुराकानीमा सन्तुलित हुनुहोस्।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – LEO
पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्न सक्छ। आमाबुवाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । खर्च बढी हुनेछ । संयमित हुनुहोस् स्वभावमा चिडचिडापन रहनेछ । स्वभावमा रिस उठ्न सक्छ । माताको साथ र सहयोग मिल्नेछ। सुख शान्ति मिल्नेछ। कार्यस्थलमा अनुकूल परिस्थिति रहनेछ। खर्च बढ्नेछ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – VIRGO
तपाई आत्मविश्वासले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ। मनमा नकारात्मकता आउन सक्छ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । काममा कामको बोझ बढ्न सक्छ। साथी आउन सक्छ। मनमा आशा र निराशाको मिश्रित भावना रहनेछ। स्वभावमा रिस उठ्न सक्छ । सन्तानबाट शुभ समाचार पाउन सकिनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – LIBRA
संयमित हुनुहोस् अनावश्यक क्रोधबाट टाढा रहनुहोस्। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । व्यापारमा सचेत हुनुहोस्। कठिनाइहरू आउन सक्छ। मानसिक स्थिति शान्त रहनेछ, तर पारिवारिक जीवनमा कठिनाइ हुनेछ। मनमा क्रोध र असन्तुष्टिको भावना रहनेछ। पुराना साथीभाइ भेट्न सकिनेछ । आम्दानीमा अवरोध आउन सक्छ । खर्च बढी हुनेछ ।
वृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – SCORPIO
आत्मविश्वास प्रचुर मात्रामा रहनेछ। धेरै क्रोध र जोशबाट बच्नुहोस्। परिवारको सहयोग मिल्नेछ । काममा प्रगतिको बाटो खुल्नेछ । बोलीमा कठोरताको प्रभाव पर्न सक्छ। कला संगीतमा आकर्षित हुनेछन् । साथीभाइको सहयोगमा आम्दानीका स्रोतहरू बन्न सक्छन्। कार्यस्थलमा थप मिहिनेत हुनेछ । लाभको अवसर मिल्नेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – SAGITTARIUS
मन प्रसन्न रहनेछ। शैक्षिक कार्यको सुखद नतिजा मिल्नेछ। काममा अधिकारीहरूसँग सद्भाव कायम राख्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्छ । असन्तुष्टि र असन्तुष्टिको अवस्था रहनेछ। वाहन सुखमा वृद्धि हुने सम्भावना छ। कार्यक्षेत्रमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । प्रगतिको बाटो खुल्न सक्छ । लामो यात्राहरु भइरहेका छन् ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – CAPRICORN
आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। आमाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । लेखन-बौद्धिक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। काम बढी हुनेछ । यात्रामा जान सकिन्छ । अत्यधिक क्रोधबाट बच्नुहोस्। जागिरमा परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ । सवारी साधनको मर्मत सम्भारमा खर्च बढ्नेछ । पारिवारिक जीवन कष्टकर हुन सक्छ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – AQUARIUS
आत्मविश्वास प्रचुर मात्रामा रहनेछ। मन पनि विचलित हुन सक्छ। जीवन अवस्था पीडादायी हुन सक्छ। परिवारका साथ धार्मिक स्थलमा जाने कार्यक्रम बन्न सक्छ । मानसिक तनाव रहनेछ। खर्च धेरै हुनेछ। जागिरमा परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। उन्नतिको योग छ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – PISCES
मन प्रसन्न रहनेछ। परिवारमा शान्ति कायम राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। बुवाको सहयोग मिल्नेछ । यात्राको योजना बन्न सक्छ । कार्यस्थलमा बाधा अड्चन आउन सक्छ। संचित कोष कम हुन सक्छ। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । मेहनत धेरै हुनेछ। स्वास्थ्य सचेत रहनुहोस्। मिष्ठान्न भोजनमा रुचि बढ्नेछ ।